SOMALIA OO ICTIRAAFKII LAGALA NOQDAY. | Berberanews.com
Home QORMOOYIN SOMALIA OO ICTIRAAFKII LAGALA NOQDAY.
SOMALIA OO ICTIRAAFKII LAGALA NOQDAY.
Sanadkii 2012 waxa London lagu qabtay shirkii uguhoreeyay ay ku kulmeen dawlada Somaliland oo uuhogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyoDawlada Ku Meel gadhka ahayn (TFG) oo uuhogaaminayo Sheekh Shariif. Shirkaasi waxaa uu ahaashirkii ugu horeeyay ee Somali loo qabto ay dawladabadan iyo hay’ado calamka ka socda ka soo qayb galan. Qaraarkii shirka ka soo baxay waxaa ku jiray qodabkalixaad (6) oo odhanayay:
“Shirku waxuu aqoonsadey baahida loo qabo in bulshada caalamku ay taageerto wada-hadal kasta eeSomaliland iyo TFG-da (Transition Federal Government/Dawlada Ku Meel Gaadhka) ama ciddiibeddesha ay ku heshiiyaan in ay yeeshaan si loo caddeeyo xiriirkooda mustaqbalka”
Shirkaasi waxuu gogasha u xadhay in la Ictiraafo dawladaKumeel-Gadhka ah ee Somalia, lakiin sida uu qodabkani6 odhanayo, waxaa lagu xujeeyay in ay wada hadal kudhameeyan mustaqbalka dawlidnimo ee Somaliland iyoSomalia yeelandoonto.
Haddaba, marka shirka London ay ku kulmeen Somalia iyo Somalialand waxaa loo qabtay khubaro ku takhususaycilmiga xalinta khilaafadka (ama conflict resolution). Khubaradani waxay wadeen in ay isku soo dhaweeyanlabada dhinac, si ay ugu heshiiayan in mid noqdan iyo in ay kala tagan. Haddii ay heshiin waayana calamku wuxuudiyaar ula ahaa in ay iyagu go’aan ka gaadhan. Taasi ooku danbayn lahayd in Afti laga qaado dadka Somaliland.
Nasiib darada dhacday waxay tahay, kooxdii Somaliland hogaaminaysay ayaa laga dhaadhiciyay in dadkashisheeye ka dhex baxaan wada hadalka Somalida, siSomalidu u wada hadasho. Taasina waa ta keentay in shirarkii lagu qabtay Turkiga, Djabouti iyo Imiradka ay Somali kaliya wada hadlayeen. Inkast, oo shirarkaasi laguheshiiyay qodaba badan oo mihim ahaa, hadana waxbakama ay fulin. Waayo dawladihii kala danbeeyay eeSomalia, khasatan dawlda Farmaje waxay u arkaysayhaddii ay qodabadani fuliyan in Somaliland awoodyeelanayso.
Haddaba, dawlada Farmaje waxay ilawday in Ictrafkadawladiisuhaysato shuruudi ku xidhan tahay.Xukumadani Farmaje waxay u qaadatay in mar haddii ay iyagu haystan Ictiraaf calamiya ay Somaliland awooddhaqaale, mid borobogande (propaganda) iyo mid ciidanba ku muquunin karan.
Dawladni waxay bilawday in ay dalbato in ciidamada loo dhiso, ciidamo badan loo taba baro, isla markana hub raadsato, iyaga oo qaramada midoobay la hortagay in cunaqabataynta hubka laga qaado. Lakiin waa lagudiiday. Haddaba, markii loo diiday hubka, waxaydoonteen in ay helaan dhaqaale ay ku furfuran shacabkaSomaliland.
Haddaba, in ay dhaqaale helaan waxaa hortaagna dayntacaalamku ku leeyahay Somaliya. Daynta dawladaSomaliya lagu leeyahay waxaa qaatay dawladii hore ay Somalia iyo Somaliland ku midaysnayeen. Sida daradeed, lacagtan waxaa lagu leeyahay Somaliya oo isku jirta, haddii lacag laga samaxayona waa in labadoodaba lagasamaxo. Dayntani oo ahayd US $5.2 Billion.
Iyaga oo ka faa’iidaysaya mashruuc IMF hirgaliso oo loo soo gabiyo HIPC (ama Debt Relief under the heavily Indebted Poor Countries), kaasi oo loogu talagalay in daynta laga cafiyo dalalka muujiya in ayna awoodi in ay iska bixin karan. Ujeeda ka danbaysa cafinta dayntawaxay tahay, in dalalka faqiirka ah lacagta daynta kubixin lahaayeen dadkooda wax ugu qabtan. Isguulo, iyoCisbitaalo ay cafimadka dadkooda ku dar yeelan galiyan, si macluusha iyo silica dadkooda u yareeyan. Haddaba,marka dal daynta laga dhaafayo waaa in ay cadeeyan inaanay iska bixin karin.
March 20, 2020 Hay’ada IMF waxay soo soo saartaywarbixin ay ku cadaysay in 36 wadan ay ka samaxdayamaahdii lagu lahaa. Dalalkani oo 30 ka midi ay qaaradaAfrika ku yaalan.
Haddaba, si daynta looga daayo Somaliya, waxaydawlada Federalka Somaliya la shirtay dawlad gobaladaSomalia ee isku bahaystay dawlada Federalka ah. Waxaanay ku heshiiyan in ay mideeyan miisaniyadood. Kadib, waxay dawlada Federalka Somaliya hay’ada IMF u gudbisay miisaniyada dawlada Federalka ee sanadkaasi.
March 25, 2020 waxay hay’ada IMF ka samaxdaydawlada Federalka dayntii ku lahayd dawladii hore eeSomaliya (Somaliland ku jirto) inteeda badan, marka lagareebo US $558 million. Waxaana lagu yidhi haddii ay dib-u-habayn dhamaystiran sameeyan waa la idin ka daynlacagtani.
Haddaba, hay’ada IMF waxay hoosta ka xariiqday in dawlada Federalka Somalia ka kooban tahay oo kaliyadawlad gobaleeda ku bahoobay oo kala ah: Punta-Land, Jubo-Land, Galmudug, Koonfur Galbeed, iyo Banadir(ayna Somaliland ku jirin).
Haddaba, si looga cafiyo dayntani hadhay ama US $558 million, waxaa lagu xidhay shuruudo. Cida ay tahay in ay fuliyan shuruudahani, maha oo kaliya dawlada Federalkaah ee waa in dawlada Somaliland qayb ka noqoto.
Waxaa dawlada Federalka loo cadeeyay, haddii ay doonayaan in lacagta laga cafiyo in labadii dawladeed eeisku jiray ee wada amaahday lacagtani marka hore heshiisku yihiin, ooy lacagta hadhayna ka midaysan yihiin in ay u hogaansamayaan in waxa laga rabo fulin doonan. Sababta ayuu wada hadalka Somalia iyo Somaliland kuyimid wakhtigan adag ee calamkii kala xidhan yahay.
Marka, dawlada federalka Somalia si ay Ictiraafdhamaystiran u hesho waxay ahayd in ay soo af-jartowada jirka ama kala–jirka Somaliland iyo Somalia. Nasiibdaro, waxay qoladani Xamar u qaateen mar haddiicasimada haystan in ay Ictiraafkeeduna dhamaystiranyahay. Haddaba, waxaa mar labaad lagu xujeeyay, haddiiaad doonaysan in kabayaasha dhaqaalaha la idinkacawiyo waa in Somaliland iyo Somalia ay heshiis kutihiin.
Waxaa igu maqaal ah in dhaqale dhan US$800 Million loogu deeqay Somalia iyo Somaliland si ay saddex sanogudahood mashruucyo loogu fuliyo. Waxaa kale la siinaya US$45 Million sanadkiiba oo lagu kabayomiisaniyada dawlda Federalk Somalia iyo ta Somaliland. Haddaba, dawlada Farmaje wuxay iska dhaadhicisay mar haddii ay iyagu Ictiraafkii haystan in ay lacagtana qaadankaran. Lakiin waxaa loo cadeeyay haddii Somaliland ka ma qantahay in waxba la siinaynin.
Shirkani waxaa la isku haystay, ooy ku kala kaceenqodanbka odhanayay “In aan la sidaasadeynkaalmooyinka dhaqaale ee calamiga ah iyo gargaarkabani-aadamnimo”. Dawlada Farmaje waxay ku dooday, mar haddii iyaga yihiin dawlada la Ictiraaf san yahay, in iyagu soo qaadan, kadibna Somaliland inteeda siiyan.Somaliland way diiday. Sida uu Qudbada MadaxwayneMuuse Biixi ku sheegay, dalalka dhaqaalaha bixiya oo dalkaMaraykanku ugu horeeyo waxay ugu jawaabeen:
“Haddii aanu waxa idin siinayno Somaliya oo dhan ayaan wax siinaynaa, haddii dayn aanu idinka daynayno Somaliya hore ooisku jirta oo dhan ayaan ku daynaynaa, haddii ayndan ku heshiisku ahayna socon mayso, sida u qaybsanaysan idinku ka heshiiya”
Somalia waxay ku faanto dawlada la Ictiraasan yahayayaanu nahay, Somaliland hawada ayaan ka sooxidhaynaa, dhaqaalaha ka soo xidhaynaa. Waxaa loo cadeeyay dawlada Farmaje, hadii Somaliland qaybteedahelin in idinkana lacag la idin siinaynin, daynin la idinkadaynin.
Haddii si kale u dhigno waxaa loo cadeeyay in Ictiraaf ay haystan aanu soconaynin. Somaliland goonideeda loolamacaamilaya, ilaa iyo inta heshiinayan.
Haddaba, dawlada Farmaje iyo dadka Xamar eeIctiraafkay ku fanayeen mee? Waxaa loo cadeeyay in Somalia haysan Ictiraaf, Ictiraafkii la siiyay laganoqday.
Hadaba, shirkani waxay Somalia ku jirtaa meel adag, waana halka aynu la rabnay. Marka laba mid ayaa noqon:
1) In dawlada Farmaje ogalaato shuruudaha ay Somaliland kula heshiiyeen oo dhan. Kuwasi oy ugumihiim sanayeen:
a) In aan la siyaasadeen kaalmooyinka dhaqaalaha eeCaalamiga ah iyo Gargaarada Bani-aadamiga. Iyo
b) In sida hore loogu heshiiyay Hawada–Sare–Somalidaloo qayb sado.
Marka haddii ay ogalaadan qodabadni, Somalilanddhaqaalo fiican ooy u bahan tahay ayay helaysa. Dhaqaaleay qadiyadeena calamka kaga olalayn karno. Calamkunawaxuu ku qasbanaan doona in Somaliland Afti lagaqaado. Haddaba, waxaa laga raba in Somaliland olalahaIctiraaf radinta ka bilawdo dalalka Galbeedka Afrika, khasatan kuwa marxaladahani aynu soo marnay oo kale soo maray; sida Senegal iyo Gambia oo kale.
2) Haddii dawlada Farmaje diido qodabadani, markawaxay calamka u cadayn doonan in ayna diyaar u ahayn wada hadal iyo nabad galyada gobalka. Marka, hay’ada IMF lacagta daynta kama dhafayso, lacagnalama siinayo. Somaliland waxay haysta markhatiyodhagaystay garteeda. Marka waa in Somalilandcalamka ka codsato in dadka Somaliland mar labaadAfti laga qaado. Waxaan hubaa calamku ogalanayo.
Lakiin, anigu ma qabo in dawlada Farmajo diidaysi. Wayo, WAA QUUS, OO LACAG AYAY U BAHAN YIHIIN (THEY ARE DESPERATE).
Somaliland shirkani waxay calamka u soo bandhigtaygarteeda. Markaa laba mid ayay noqon doonta:
a) In Somaliland maxkamad iyo hay’da sida AfrikanUnion qadiyada gayso, oo halka laga dodo. Taasinaay dhaxalsiin doonto in dadka Somaliland Afti lagaqaado.
b) Haddii kale, waxay Somaliland u bahan tahay in ay saxibo kale raadsato.
Somaliland waxay ku tala meel Istarataji ah (strategy), oobadeecadaha calamka iskaga goosha badankeeda ayaa inahor mara. Khasatan, kuwa u socda Asiya, Afrika iyoYurub. Sida daradeed dalalka Yurub iyo MaraykankuSomaliland way u bahan yihin.
Mida kale, calamka waxaa ka jira loolan dhaqaale iyomulitari. Dalka Maraykanku waa awooda ugu wayn eedhaqaale iyo military ee calamka. Lakiin, waxaa iminkakula tartamaya dalka Shiinaha, oo saldhig mulitari ku lehdalka DJabouti.
Sidoo kale, dalka Ruushka oo ka maqnaa loolankasiyaasada ayaa ku soo biiray iminka. Waxanay bilaabeenin ay soo celiyan xidhiidhkii qarada Afrika la lahayeen. Mida kale, dagaalka Liibiya ka socda, dalalka Ruushka, Masar iyo Imaradku ayaa isku dhan ah oo tageerayaJanaralka Hafti, halka Qadar iyo Turkiguna dhinaca kale yihiin.
Ujeeda ugu wayn ee Ruushku ka leeyahay tageeridaJanaral Hafti waa inuu saldhig mulitari ka helo Liibiya, siawoodisa bada Madetrian iskugu fidiyo. Sidoo kale, dawlda Eritiriya ayaa saldhig mulitari ka siisay Bada Cas.
Marka, Somaliland waa bogcada kaliya ee badaCas/Carbeed een cid haysan. Dalalka galbeedkuna maraban in cid iyaga ka soo hor jeeda ay timado Somaliland. Sida daradeed, haddii dalalka Galbeedku ixtiraamiwaayan go’aanka shacabka Somaliland. Somaliland waain ay xulafo kale oo tageera qadiyadadeeda raadsato.
​SOMALILAND HA NOOLATO!!!!
OMAR A YOUSUF​
Previous articleMadaxweynaha Djibouti oo si heer sate ah u sagootiyay weftigii Somaliland
Next articleCabsida Faransiisku ka qabo Awoodda Turkiga